Translation| Localization| Transcription| Voice Talent| Training|
Language Maison centers People.
ပြည်သူ့ဆိုင်ဆိုတာ - ပြည်သူနှင့် တသားတည်း ရပ်တည်သော ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
Language Maison သည် ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သင်ကြားမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်သော ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပြီး ပြည်သူနဲ့တသားထဲဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူများဘက်မှရပ်တည်သော ဝန်ထမ်းများ၏ သားသမီးများ၊ မိဘပြည်သူများ၏ ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက် တတ်နိုင်သောဘက်မှ ပံ့ပိုးပေးပါမည်။
Please email info@languagemaison.com or call 09968854411 for more information.
English with us is justacall away!
အတန်းသစ်အစီအစဉ်များ၊ တယောက်ချင်းသင်ကြားမှုများ၊ ဘာသာစကားဝန်ဆောင်မှုများကို စုံစမ်းရန်အတွက် info@languagemaison.com ကို email ပို့၍သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် 099 688 544 11 နှင့် 09 44 320 6168 တို့သို့လည်းကောင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။
Language Maison တွင် သင်တန်းများ၊ ဘာသာစကားဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပရိုဂရမ်အစီအစဉ်များစွာမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိတ်ဟောင်း၊မိတ်သစ်များ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။
Way to Go Burmese Program (Learn Burmese) |
Audio Transcription |
Voice Talent |
Corporate Language Training |
Copyright @ 2021 Language Maison | Myanmar - English - French Languages |
Maison Galaxy Co.,Ltd